Guddoomiyaha UCID oo ergo u diray Madaxweyne Biixi | Berberanews.com
Home WARARKA Guddoomiyaha UCID oo ergo u diray Madaxweyne Biixi
Guddoomiyaha UCID oo ergo u diray Madaxweyne Biixi
Hargeysa-(Berberanews)- guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Ucid Faysal Cali Waraabe, ayaa sheegay in la soo kala gaadho isaga iyo Madaxweynahan Somaliland oo uu ku eedeeyay inuu xidhay musharraxiin xisbigiisa ka tirsan.
Faysal oo maanta ka hadlayay xaflad uu xisbigiisu kuso dhawaynayay musharixiin, ayaa madaxweynaha Somaliland ugu baaqay in uu xoriyadooda usoo celiyo laba musharax oo uu guddoomiyuhu sheegay in dawladu ka xidhay.
Guddoomiye Faysal Cali waraabe oo jeediyay, hadal dheer oo dhinacyo badan taabanaya, ayaa sheegay in madaxwaynuhu shaqo fiican ka qabtay sidi doorashadu u qabsoomilahayd lakin uu ka daba yimid wanagaa, kadib markii laba musharax oo ka sharaxnaa xisbiga Ucid la xidhay.
“Maal mahan danbe waanu fiicnayn, madaxweyne Muuse wuu fiicnaa, wuxu yidhi lacagtii aan handarabka ku qabtay waaniga ku qabtay diiwaangalinta, Alle haku siiyo baanu nidhi hadad handaraab kii inoogu qabatay doorashoyinka, tii kalena waa kii digreetadii qoray, dee laakin wuu ka daba yimidoo shalayto wuxu xidhay laba nin oo musharixiina, sharci lagu xidhaana ma jiro, umadu haday sharci ku kala socon waydo way isku qabsanaysa”. Ayuu yidhi gudoomiyuhu.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in aanu doonayn in uu mudaharaad dhigo lakiin hadii musharixiinta lasoo dayn wayo ay mudaharadi doonan “hadii lasoo dayn wayo waanu madaharadi, mudaharadna maanta dalkeena uma banana, oo dad aan inala mabda ahayn ayaa salaada inagu xidhanaya” ayuu yidhi gudoomiyuhu.
Gudoomiyaha ayaa hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, in aanu doonayn in ay madaxweynaha isku dhacaan lakin hadii uu madaxwaynuhu gurigiisa ugu soo galo uu iska celin doono.
Previous articleRamaax oo ka biyo diiday jaangoynta qiimaha laydhka Berbera
Next articleBeesha caalamka oo soo dhawaysay doorashooyinka Somaliland